Tsy Mahazo Alefa Any R.D.Kôngô Ilay Horonantsary “Ilay Lehilahy Manamboatra Ireo Vehivavy, Ny Hatezeran’i Hippocrate” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Oktobra 2015 13:06 GMT
Vakio amin'ny teny English, polski, Español, Esperanto , Français
Dikasarin'ilay fanadihadiana “L'homme qui réparait les femmes” (Ilay lehilahy nanamboatra ireo vehivavy)
Nalefa efa hatry ny volana Martsa 2015 tany La Haye, tao amin'ny Fitsaràna iraisampirenena misahana ny ady heloka bevava, tany Bruxelles, tany Parisy sy tany Montréal; ilay horonantsary “L’Homme qui répare les femmes, La colère d’Hippocrate” izay notontosain'ilay mpanao gazety Colette BRAECKMAN sy ilay mpanatontosa sarimihetsika Thierry MICHEL momba ny asan'i Dokotera Denis Mukwege. Fa tao amin'ny firenena nahaterahany kosa, tao amin'ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô, tsy navela natao nanerana ny firenena iray manontolo ny fandefasana azy, na tao amin'ny Ivon-toerana frantsay ao Kinshasa aza, izay saika nandefasana azy ny 8 sy 9 septambra 2015.
Nalaina tao amin'ny Youtube ilay horonantsary, ary tao anatin'ny herinandro monja, nojerena in- 13 000 isa.( Tsy hita ao amin'io sehatra io intsony ankehitriny ilay horonantsary noho ny antony fizakàmanana).
Tao anatin'ny votoaty iray nalefa tao amin'ny vohikala Lubumbashi Infos mitondra ny lohateny hoe RDC : LA GUERRE D’IMAGES ET LE FILM “L’HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES“, nandefa ampahany sy nanazava ilay ampahany nahatonga resabe i Didier Mukaleng-MAKAL Kanteng, mpanao gazety sy mpitoraka bilaogy any Lubumbashi ao amin'ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô:
Dr Mukwege, noraisina tamin'ny tehaka, teo am-pidirany ho ao aminà efitra lehibe iray, nandeha teny amin'ny lampihazo. « Vavolombelon'ireo zavatra nahatsiravina nanoherana ireo vehivavy sy natao tamin'ireo vehivavy, nandritra ny 15 taona », nilaza izao teny izao izy :
« Ao amin'ireo faritra mifanditra, hoy izy nanohy, eny amin'ny vatan'ireo vehivavy no miseho ny ady. Atao ao anatin'ny herisetra tanteraka ireo fanolanana. Tena fitaovana iray entina iadiana mihitsy, raha tsy izay, hevitra entina miady fa tena azo mora be. Kanefa tena mandaitra tokoa. »
Manomboka eo amin'ilay hoe « fitaovana iray entina iadiana… », ao anatin'ilay kabariny, sary mandeha ho azy mampiseho tanàna mahonena, efa ho may tanteraka, no asehon'ilay sarimihetsika. Sary tena toy ny apôkalipta mihitsy. Misy kamiao kelin'ny miaramilan'i Kôngô mipoitra avy eo ; miaramila maro mirongo fiadiana, toy ny sahobakaka ambody riana.
Tao amin'o kabariny io ihany, nanomboka teo amin'ilay ampahany « fitaovam-piadiana tena mandaitra », nisy bala afomanga nalefa. Olon-tsotra mandositra no hita miseho eo ambanin'ny làlan'ny tifitra, ary heno avy eo ito feo ito hoe « kaomandà ? » : « ambanimbany kely », sahala amin'ny hoe mba hahavoa ireo olon-tsotra. Ny farany, mipoitra ny andian'ireo nafindra noho ny ady… avy eo, miverina amin'ny kabarin'ilay mpitsabo.
Mifototra amin'ireo sary ireo (izay voafetra ihany kanefa tena mampiseho tsara ny tiana ambara!), toa hita mifamatotra amin'ny tafika ireo herisetra ara-nofo.
Ny dokotera Denis Mukwege, ilay liégeois mpanatontosa, Thierry Michel ary Ramatoa Hillary Clinton. Loharano: mobile.sudinfo.be
Tamin'ny vavan'ny minisitry ny Serasera sady mpitondra tenin'ny governemanta, M. Lambert Mende, nanamarina ilay fandraràna ny governemantan'i Kôngô, tamin'ny fiampangàna ilay horonantsary ho fanelezana tsaho, finiavana tsotra izao ny hanimba sy handoto ny endriky ny miaramilan'i Kôngô.
Fikambanana izay manana tanjona ny hampahafantatra ny satan'ireo mpanatontosa lahatsary fanadihadiana sy ny hahazoany ny fiarovana ary ny ampahan'ireo zony isaky ny misy fandefasana ny asan'izy ireo ny Scam.fr, ivondronan'ireo mpamorona lahatsary sy mpanao gazety maherin'ny 37.000 isa. Malahelo amin'ny fandraràna ny fandefasana ilay horonantsary ao R.D.Kôngô io fikambanana io ary manazava ny antony maha-manimba zavatra io fandraràna io:
Tokony ho ampy hahatonga saina ny governemanta Kôngôle ireo onjanà fanehoankevitra politika sy arak'asa izay taitra sy misintona lakolosy amin'io fandraràna io, hoe tena ilaina amin'ny fanamarinana azy anatiny sy ivelany ny hanekeny hoe misy manao asa firaketana ilaina mba hamerina ny voninahitr'ireo vehivavy niharan'izany, sady ihany koa mba hiaro ireo vehivavy rehetra amin'ny habibiana vaovao.
Avy aminà loharano maro, voalaza anaty lahatsary fa mpikambana avy amin'ireo vondrona mpihoko eo an-toerana sy any ivelany ary ireo miaramilam-panjakana no manao ireny heloka feno habibiana ireny. Tena marefo ao anatin'ity tantara ity ilay Floham-pirenena teo aloha Laurent-Désiré Kabila, rain'ny Filoha ankehitriny Joseph Kabila Kabange, izay tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny alàlan'ny ady anaty akata ary nitondra nandritra ny 4 taona teo ho eo. Na lazaina ho ireo mihoko na ireo miaramilam-panjakana no nanao ireny habibiana ireny, samy efa notantanan'ny filoha teo aloha nifanesy daholo ireo karazan'olona mitam-piadiana roa ireo, izay ampangaina ho manao fanolanana.
Afaka azontsika tsara, araka izany, hoe sahirana mafy ny governemanta Kôngôle tamin'ilay asa nikoizana sy ireo fiampangàna nataon'ny Dr. Denis Mukwege tohanan'ny fiarahamonim-pirenena iraisam-pirenena. Ny 30 may lasa teo, izay aloha be an'ilay fandraràna ilay sarimihetsika, nanoratra izao ny journeefemmeafricaine.com:
Olona maro no miara-mientana nandritra ny dimy ambinifolo taona, miampanga, miara-mientana, indrisy, fa kely ny vokatra. Antony tokony hijanonana tsy hiady intsony ve izany ? Tsia mihitsy, ny mifanohitra amin'izany aza. Tazonintsika an-tsaina ny ohatra nataon'i Aoua Keita, tompon-kevitra tamin'ny nanaovana ny Andro Iraisampirena ho an'ny vehivavy Afrikana, ary amin'io vehivavy tena manainga fanahy io, miteny amin'ny tenantsika isika hoe tsy afaka ny tsy hanao zavatra isika, na dia toa kely tokoa aza manoloana ny fihetsika tsy manaja ny maha-olona zakain'ireo vehivavy any amin'ireo faritra misy fifandonana any amin'ny Repoblika demôkratikan'i Kôngô.
Mahatsapa tena ho tsy manan-kery isika satria tsy afaka miditra an-tsehatra mivantana eny an-kianja, kanefa diso izany, misy dikany daholo ny fihetsika rehetra amin'ny tranga toy izao. Ary tsy maintsy manao zavatra araka izay vitanao ianao, amin'ny toerana misy anao ary miaraka amin'ny fitaovana e an-tànanao…
Taminà fanangonan-tsonia nataon'i Me Hamuli Rety, filoha taloha tao amin'ny Fikambanan'ireo mpisolovava ao amin'ny Fitsaràna Iraisampirenena misahana ny Ady Heloka Bevava ho an'i Roandà, izay nosoniavin'ireo olona maherin'ny 50 000 isa, nampahatsiahy izao:
Nitatitra ny UNICEF hoe niandraikitra tranganà herisetra niisa 38 000, natao tamin'ireo vehivavy ny taona 2007 fotsiny izy ireo. Ny FIDH (Federasiôna iraisampirenena an'ireo ligin'ny zon'olombelona) miresaka tranga niisa 3 300 ny taona 2012 ho an'ny faritany atsinanana fotsiny, izany hoe eo amin'ny tranga miisa folo isan'andro eo. Ny ONU indray, nanamafy fa vehivavy eo amin'ny 48 eo isan'ora no voaolana any amin'ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô. Ny zavatra hita aloha no eo fa mbola tsy misy vahaolana noraisina: tsy misy manampahefana nandray fepetra mahomby mba hampitsaharana ireny heloka bevava ireny.
Ireo tarehimarika, momba ny isan'ireo vehivavy voaholana ireo, dia tokony horaisina am-pitandremana ihany satria amin'ny tena izy dia mety ho betsaka kokoa ireo. Milaza fanadihadiana nalefa tao amin'ny gazety amerikana momba ny fahasalamam-bahoaka (American Journal of Public Health) ny vohikala wikistrike.com, fanadihadiana milaza hoe vehivavy sy tovovavy eo amin'ny 15 hatramin'ny 49 taona, miisa maherin'ny 400 000, no voaholana tao anatin'ny 12 volana, tao anelanelan'ny taona 2006 sy 2007. In-26 avo heny amin'ireo tarehimarika nolazain'ny ONU ho anà fotoana mitovy.
Ho an'ilay hetsika mitsinjo ny maha-olona nataony izay mikendry ny hamerina ny voninahitr'ireo vehivavy sy ankizy voaholana, nahazo loka sy fankasitrahana nasiônaly sy iraisampirenena efa ho roapolo ny Dr. Denis Mukwege, izay ny lokan'ny zon'olombelona avy amin'ny Firenena Mikambana, ny loka Sakharov ho an'ny fahalalahan-tsaina, nomen'ny Parliemanta eorôpeana, ny loka Fondation Clinton, ny loka Olof Palme, ny Loka Inamori ho an'ny Fotokevitra 2014 (Japàna-Etazonia), ny loka Primo Levi (Italia), ny loka Solidaris an'ny hopitaly Saint-Pierre de Bruxelles (Belzika) ary ny medalin'ny akademian'ny mpanjaka ho an'ny siansa an'ny Pays-Bas
Kanefa tao amin'ny fireneny, mbola manohy tsy miraharaha azy ny governemanta ary mandrahona an'i Mukwege ny sasany amin'ireo vondrona mpampihorohoro. Tsy mandeha afa-tsy eo ambany fiarovan'ireo miaramilan'ny Firenena Mikambana izy ao anatin'ny fireneny.